DWG Ithuluzi Lokutakula. Isoftware yokulungisa nokubuyisa i-AutoCAD.
DataNumen DWG Recovery iyona best AutoCAD DWG ithuluzi lokulungisa nokubuyisa emhlabeni. Ingalungisa i-AutoCAD ekhohlakele DWG amafayela bese uthola idatha yakho eningi ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela unciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,618)
Kungani DataNumen DWG Recovery?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile we DWG umkhiqizo wokutakula. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen DWG Recovery inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu kunanoma iyiphi enye imbangi emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen DWG Recovery kubhema umncintiswano
Isixazululo Sokulandela Amaphutha e-AutoCAD Ngenxa yokonakala DWG amafayela
Isixazululo sephutha "lokudweba alilungile"
Isixazululo se- “Iphutha Langaphakathi [i-imeyili ivikelwe]: eOutOfRange ”Iphutha
Isixazululo se- "Non Autodesk DWG”Iphutha
Izici eziyinhloko ku DataNumen DWG Recovery v3.0
Ukusekela ukuthola i-AutoCAD R14 kuya ku-2021 DWG amafayela.
Ukusekela ukuthola izinto ezilandelayo ku DWG amafayela: VIMBELA, IPHOYinti, I-LINE, I-ARC, ISIKHUNGO, I-ELLIPSE, i-SPLINE, i-XLINE, i-RAY, i-SOLID, i-3DFACE, i-LWPOLYLINE, i-POLYLINE (2D), i-POLYLINE (i-3D), i-POLYLINE (PFACE), i-POLYLINE (i-MESH), i-VERTEX (2D) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENSION (LINEAR), DIMENSION I-ALIGNED), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), LEADER, TOLERANCE, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYERB, STAYLE, STAY STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, BHEKA CONTROL OBJ, BUKA, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APPID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTROL OBJ, DIMSTYLE.
Ukusekela ukuthola kabusha i-lost & uthole izinto ku- DWG amafayela.
Ukusekela ukuthola izinto ezisusiwe ku- DWG amafayela.
Ukusekelwa ukuze uthole kabusha DWG ukudweba kusuka kuthempelirary lapho kwenzeka inhlekelele yedatha.
Ukusekelwa kokukhishwa kwefayela elihleliwe ku- DWG format nefomethi ye-DXF.
Ukusekelwa kokukhishwa kwefayela elihleliwe kufomethi ye-AutoCAD R14 kuya ku-2017
Ukusekela ukulungisa DWG amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo le- DWG amafayela.
Ukusekela ukuthola nokukhetha ifayela le- DWG amafayela azolungiswa kukhompyutha yendawo.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa i-AutoCAD DWG ifayela elinemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen DWG Recovery Ukubuyisa i-AutoCAD Ekhohlakele DWG Amafayela
Lapho i-AutoCAD yakho DWG amafayela akhohlakele noma alimele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungawasebenzisa DataNumen DWG Recovery ukuskena DWG amafayela bese uthola idatha eningi evela kubo ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yikuphi okonakele noma okonakele dwg amafayela nge DataNumen DWG Recovery, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha i dwg amafayela.
Khetha okonakele noma okonakele dwg ifayela elizotholwa:
Ungafaka i dwg igama lefayela ngqo noma chofoza
ukuthola inkinobho dwg ifayela elizotholwa kukhompyutha yendawo.
Uma uyazi ifomethi yomthombo ilimele DWG file, lapho-ke ungalichaza ebhokisini le-combo:
Ngokuzenzakalelayo, isethwe ku- "Auto Determined", okusho ukuthi DataNumen DWG Recovery izohlaziya futhi inqume ifomethi yayo ngokuzenzakalela.
Njengamanje amafomethi alandelayo asekelwa emthonjeni DWG amafayela:
I-AutoCAD 2013-2017 DWG Ifomethi
I-AutoCAD 2010-2012 DWG Ifomethi
I-AutoCAD 2007-2009 DWG Ifomethi
I-AutoCAD 2004-2006 DWG Ifomethi
I-AutoCAD 2000-2003 DWG Ifomethi
I-AutoCAD i-R14 DWG Ifomethi
Ngephutha, DataNumen DWG Recovery izogcina okungaguquki dwg fayela kufayela elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.dwg, lapho i-xxxx igama lomthombo dwg ifayela. Isibonelo, komthombo dwg ifayela Lonakele.dwg, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizolimala_fixed.dwg. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Uma okukhiphayo kufayela elilungisiwe kune-.DWG isandiso ke DataNumen DWG Recovery izoyikhipha DWG ifomethi.
Uma okukhiphayo okukhiphayo ifayela kunesandiso se-DXF, lapho-ke DataNumen DWG Recovery sizoyikhipha ngefomethi ye-DXF.
Ungacacisa ukuphuma kwefomethi yefayela elihleliwe ebhokisini le-combo:
Ngokuzenzakalelayo, uma ungacacisi ifomethi yefayela lokukhipha, lapho-ke DataNumen DWG Recovery izosebenzisa ifomethi efanayo nomthombo DWG Ifayela.
Okwamanje amafomethi okukhipha alandelayo ayasekelwa:
inkinobho, futhi DataNumen DWG Recovery intando start ukuskena nokuthola umthombo dwg ifayela. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokutakula, uma ngabe umthombo dwg ifayela lingatholwa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomlayezo kanjena:
Manje usungavula i-fix dwg ifayela nge-AutoCAD noma enye dwg izinsiza.
DataNumen DWG Recovery 3.0 ikhishwa ngoMeyi 3, 2021
DataNumen DWG Recovery 2.1 ikhishwa ngoDisemba 16, 2020
DataNumen DWG Recovery 1.9 ikhishwa ngoNovemba 4, 2020
DataNumen DWG Recovery 1.8 ikhishwa ngoJuni 30, 2020
Ukusekela ukuthola i-AutoCAD 2018 kuya ku-2021 DWG amafayela.
DataNumen DWG Recovery 1.7 ikhishwa ngoNovemba 19, 2019
Yenza kabusha injini yokuthola kabusha iqoqo.
Ukusekela ukugcina ilogi yokutakula i-batch.
DataNumen DWG Recovery 1.6 ikhishwe ngo-Ephreli 19, 2018
Ukusekela ukuthola i-AutoCAD 2015 kuya ku-2017 DWG amafayela.
DataNumen DWG Recovery 1.5 ikhishwe ngoMeyi 29, 2014
Ukusekela ukuthola i-AutoCAD R14 kuya ku-2003 DWG amafayela.
DataNumen DWG Recovery 1.1 ikhishwe ngoMashi 31, 2014
Ukusekela ukuthola i-AutoCAD 2004 kuya ku-2006 DWG amafayela.
DataNumen DWG Recovery 1.0 ikhishwe ngoJanuwari 7, 2014
Ukusekela ukuthola i-AutoCAD 2010 kuya ku-2014 DWG amafayela.
Ukusekela ukuthola izinto ezilandelayo ku DWG amafayela: VIMBELA, IPHOYinti, I-LINE, I-ARC, ISIKHUNGO, I-ELLIPSE, i-SPLINE, i-XLINE, i-RAY, i-SOLID, i-3DFACE, i-LWPOLYLINE, i-POLYLINE (2D), i-POLYLINE (i-3D), i-POLYLINE (PFACE), i-POLYLINE (i-MESH), i-VERTEX (2D) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENSION (LINEAR), DIMENSION I-ALIGNED), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), LEADER, TOLERANCE, BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYERB, STAY, STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, BHEKA CONTROL OBJ, BUKA, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APPID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTROL OBJ, DIMSTYLE
Ukusekelwa kokukhishwa kwefayela elihleliwe kufomethi ye-AutoCAD R2.5, R2.6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 2000 to 2014.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa i-Outlook DWG ifayela elinemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Lungisa futhi ubuyise isithombe se-Photoshop esonakele (PSD, PDD).
Lungisa futhi uthole i-Acrobat ekhohlakele PDF amafayela.